China Umatshini wokucoca umatshini weLaser kunye noMthengisi | Zhancheng
★ Umatshini wokucoca i-Laser sisizukulwane esitsha sonyango oluphezulu sonyango oluphezulu, oluhlaza kunye nokusingqongileyo, ukuze ubumdaka bomhlaba, umhlwa okanye ukutyabeka kukhuphuke okanye ukuchuba, kwaye kususe ngokufanelekileyo ukufakelwa komhlaba okanye ukutyabeka komphezulu wento yokucoca ngesantya esiphezulu, ukuze kufezekiswe inkqubo yokucoceka kwenkqubo.
★Umatshini wokucoca i-laser kulula ukufaka, ukusebenza kunye nokuqonda ukuzenzekelayo. Kulula ukusebenza kwaye ungasusa ioyile yentlaka, amabala, ubumdaka, iglu, umhlwa, ukubola, ukucoca kunye nepeyinti kumphezulu wezinto.
★Ingayifumana ngokuchanekileyo kwaye icoce ukucocwa koqhakamshelwano, ikhusele umphezulu wezinto ezinobunzima, kwaye isuse ngokufanelekileyo amasuntswana angcoliseko lomgangatho; inobuhlobo kwindalo kwaye ayifuni zinto ziphathekayo; oku akuthethi kuphela ukuba ukucoca i-laser kuyasebenza, kodwa inkqubo yokucoca iyalungisa imeko. Ukongeza, ayisebenzisi iiarhente zokucoca iikhemikhali, ngaloo ndlela kuthintelwa ukonakala kwento ebangelwe kukubola kwemichiza.
Umzekelo womatshini ZCFC 1000
Amandla e-Laser 1000W
Ubushushu bamanzi 18-26℃
Ubushushu Working 5-40℃
Ukuskena ububanzi ≤80mm
Amandla apheleleyo 14000W
Indlela yokupholisa Ukupholisa amanzi
Ukucoca i-Laser kungoku nje kusetyenziswa ngokubanzi kumzi mveliso, kwaye ubukhulu becala kuthandwa kakhulu kumashishini afana nokubumba, ukuvelisa imoto, ukubuyiselwa kwezinto ezingasekhoyo kwinkcubeko, kunye nokwakha iinqanawa. Ukusetyenziswa ngokubanzi kwishishini, elinokunciphisa ngokufanelekileyo iindleko zokugcinwa kwamashishini kunye nokuphucula umphumo wokucoca kwimizi-mveliso
Egqithileyo Umatshini wokuMakisha weFiber Laser ovalelweyo
Okulandelayo: Umatshini wokuMakisha weFiber Laser